UWilliams uyayiqonda indima yakhe eqenjini lama-Olympics
Kuzothatha amehlo ukubona ukuthi yimuphi unozinti umqeqeshi weqembu lika-Under 23, uDavid Notoane azoqala ngaye uma sebebhekene neJapan ngoLwesine emini. Iqembu lakuleli lizodlala umdlalo wokuqala kuma-Olympics nelasekhaya iJapan. Umdlalo uqala ngo 1 emini.
Konozinti uNotoane uphethe izibabuli njengoba ehambe noRonwen Williams weSuperSport United neBafana Bafana, uSifiso Mlungwana weGolden Arrows noMondli Mpoto weBloemfontein Celtic.
UWilliams noMlungwana badlale kahle emaqenjini abo ngesizini edlule. Lokhu kuzokwenza uNotoane anwaye ikhanda ngaphambi kokuqoka azoqala ngaye kulo mdlalo obalulakile. Kuma-Olympics adlule, uNotoane wagxekwa esebenzise u-Itumeleng Khune wayeka ayekade esize iqembu lingene kule midlalo.
UWilliams uthe ukujabulele ukuba kuma-Olympics. “Njengomdlali osekhulile, ngilapha ukuzokwenza umsebenzi wami okuukudlala ibhola. Ngethemba nokuthi ngizokwazi nokusiza abafana abasebancane eqenjini kwazise seingidlale ezingeni eliphezulu lebhola iminyaka engaphezu kweyishumi.
“Ngakho ngizobathekela ngolwazi namava enginawo,” kusho lo nozinti. UWilliams uthe ukuqokwa kuleli qembu njengomunye wababibi babadlali abangaphezu kuka-23 yinto enkulu kuye.
“Yinto enkulu lena kimi. Kufezeka iphupho, kuyintokozo enkulu kimi ukuzoveza ikhono lami emncintiswaneni omkhulu kangaka. Ngethemba ukuthi ngemuva kwalo mncintiswano abanye bethu bazosayinwa amaqembu amakhulu emhlabeni.
“Yithuba elihle kakhulu leli lokuveza ikhono kubuka umhlaba wonke,” kuchaza uWilliams. Iqembu lakhe, iSUperSport linabadlali bathathu kulo mqhudelwano uma kubalwa naye. Kukhona noLuke Fleurs noTeboho Mokoena, uSipho Mbule yena usale ngenxa yezinkinga zezempilo.
Ngaphezu kwalaba abathathu, noMpoto, Kamohelo Mahlatsi noKatlego Mohamme baphuma enkulisa yallei qembu lasePitori. Nephini lomqeqeshi, uKwanele Kopo usebenza enkulisa yaMatsatsantsa.
“Lokhu kuwuphawu oluhle ngeqembu… iSuperSport iyaziwa ngokukhiqiza ukhilimu wabadlali ngenkulisa yayo kanti lokho wumsebenzi omuhle wabaqeqeshi abafana noKopo.
“UMondli wenze kahle emaqenjini abamcane esizwe futhi ngiyaziqhenya ngaye. Indlela asenyuke ngayo esuka enkulisa aze afike ezingeni elikhokhelayo yinhle. Sinobudlelwano obuhle naye futhi kumnandi ukuphinde ngisebenze naye eqenjini elilodwa.”
FUNDA NALA: Bacasukile abamaBhokobhoko, bazokhiphela isibhongo kwiLions
UWIlliams uthe kube kuhle ukuthi basheshe bafike eTokyo njengoba kushisa nje. Uthi lokho kubasize ukuthi basheshe basijwayele isimo sezulu sakhona.
“Kuyashiya kakhulu la eTokyo. Kodwa sibe neviki lonke ukuthi sizijwayeze isimo sezulu salapha ngaphambi kokuqala kwemidlalo. Sizokwenza okusemandleni ukulimela ngobuqotho izwe,” kusho lo nozinti.
Previous Previous post: AmaBhokobhoko azobhodlela kwiLions ngabawasola ngokungavuthwa
Next Next post: IFIFA ihlokoloza isidleke sezinyosi ngoguquko eluhlongozayo ebholeni